Hello Nepal News » मेस्सी कहिलेबाट फर्किँदैछन् प्रशिक्षणमा ?
मेस्सी कहिलेबाट फर्किँदैछन् प्रशिक्षणमा ?
क्लब छाड्ने निर्णय गरेर पुनः बार्सिलोनामै बस्ने फैसला गरेका कप्तान लिओनल मेस्सी टोलीसँगै प्रशिक्षणमा फर्किने तयारीमा छन् । ३३ वर्षका अर्जेन्टिनी फरवार्डले सोमबारदेखि प्रशिक्षण थाल्ने अपेक्षा गरिएको छ । यदि उनले कोरोना भाइरस जाँच र नियमित स्वास्थ्य जाँच पास गरे उनी सोमबारदेखि टोलीसँगै प्रशिक्षणमा उपलब्ध हुनेछन् ।
सिजन सकिएपछि बिदामा रहेका मेस्सी हालसम्म क्लबका कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी भएका छैनन् । क्लब छाड्ने निर्णय गरेर घरमै बसिरहेका उनले यसअघि प्रि–सिजन मेडिकल जाँच र प्रशिक्षण गुमाएका थिए । तर, उनले बार्सिलोनामै रहने फैसला गरेपछि अब टोलीमा उनको आगमनको पर्खाइ छ ।
बार्सिलोनाले घरेलु लिग ला लिगाको नयाँ सिजन सुरु गर्नुअघि दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तालिका तय गरेको छ । जसमा शनिबार जिमन्यास्टिक टारागोना र त्यसपछि सेप्टेम्बर १६ मा जिरोनासँग दोस्रो प्रि–सिजन मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तालिका छ । यी खेलपछि बार्सिलोनाले सेप्टेम्बर २७ तारिखमा भिल्लारियलसँग खेल्दै ला लिगाको नयाँ सिजनको सुरुआत गर्नेछ । बार्सिलोनाले खेल्ने ला लिगाका सुरुआतका दुई खेल स्थगित भएका छन् । उसले तेस्रो साताको खेलबाट लिग थाल्नेछ ।
प्रकाशित मिति २१ भाद्र २०७७, आईतवार ०४:१४